Vodka - isiphuzo yendabuko Russian. Lokhu akusona isimanga - lwamaSlav wayazi izinto eziningi izidakamizwa ezinamandla. Sekungamakhulu eminyaka kulokho manje iRussia, abantu okuphekiwe kvass, iwayini, Mead, Braga. Igama elithi "vodka" zaqala ukusetshenziswa eduze ekhulwini XX, kanti ngaphambi kwalokho umuthi okuthiwa kakolweni noma ezinye iwayini.
Kusukela umlando likagologo
Utshwala etholwe ekuhlolweni, isiNtaliyane noma alchemy Arabhu. Ziyakwazi beyofuna itshe sefilosofi sika okwenziwe bathole okuningi. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, kukhulunywa okokuqala likagologo eziqukethwe "Vyatka indaba" ngekhulu XII. Nakuba abacwaningi abaningi bakholelwa ukuthi imimoya ukwenziwa eside ngaphambi olotshiwe.
Ukusetshenziswa kabanzi igama elithi "i-vodka" kwaba kuphela ekhulwini XIX. Lokhu akusona isimanga: ekhulwini XVI, i- "yokucima ukoma Tsar sika" lokuqala wavulwa e Moscow - a Analogue yesimanje kwebha. Lapha izivakashi wazama imimoya ezahlukene, kodwa ethandwa kakhulu kwaba vodka Russian. Kwaphela amakhulu eminyaka, uhulumeni silawula yonke le ziphuzo zazihluzwa, intela ekhokhelwa intela kule mboni, ke oye wahlushwa ukusetshenziswa Imininingwane utshwala, kwenza ukukhiqizwa "namandla" ilungelo okukhethekile yezikhulu. Ngaphansi uCatherine II, ngamunye Umninindawo-umakhi ukukhiqiza brand ayo likagologo. Umncintiswano yayinkulu, futhi ikhwalithi yomkhiqizo - esihle. Ngalezo zinsuku esemthethweni isilinganiso vodkas kwakungekho muntu, kodwa nokho, anise kanye pepper iziphuzo zenani ngaphezu kwabo bonke abanye.
Umncintiswano phakathi uphuzo oludakayo
Vodka ikhiqizwa hhayi kuphela e-Russia - kwamanye amazwekazi lesi siphuzo kuphinde atholwe abayithandayo yayo. Swedish vodka "Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke", sekuyisikhathi eside okuyinto kube umholi wezwe, akaphelelwa ezikhundleni zawo manje. Akumangalisi ukuthi lo mncintiswano ligcinwe phakathi imimoya engcono emhlabeni bavela amaMelika: ungomunye odumile ngekhono lakhe ukuba izilinganiso umgomo. Ucwaningo okuqala lwenziwe phakathi abathengi ngo-2011 inkampani wahlanganyela ukungenisa likagologo e-United States.
Ngemuva abangane babo Western Sethule lo mkhuba e-Russia kanye emazweni CIS. Minyaka yonke, abakhiqizi kakade neshaya umkhakha zifiki ukubeka umkhiqizo wabo ku inkantolo amajaji azimele.
Top 10 abawinile global
Ukudala simo emhlabeni likagologo, umfakisicelo inkampani ukuncintisana phakathi imimoya wabutha abameleli okuhamba phambili umkhakha iwayini, tasters professional kanye abathengi. Umkhiqizo ngamunye nohlolwe abantu 30-40. Hlangana nokhunye ukuthi ziyadingeka ukuhlola, babe iphunga, ukunambitheka, obala, aftertaste. Phakathi kwabayishumi abaphasa ngamalengiso bobabili brand adumile nabantu abaqala ukuza ngokufanayo.
"Grey Goose" - vodka ezivela esifundazweni isiFulentshi Cognac - wathola aphakeme izilinganiso abathengi kanye nochwepheshe.
Isiliva neyethusi izindondo wathola brand Russian "Crystall" kanye Polish -trade mark "Krolewska". Yaba incwadi wesine vodka Russian, sasipheka iresiphi zakudala - "Youri Dolgoruki". Isimanga ukuthi abaholi bomhlaba ezinhlanu iphetha okungcono vodka Finnish "Finlandia". Wathatha isikhundla wesithupha Russian brand "Igugu Russia" - tasters adunyiswe iresiphi yasekuqaleni futhi indlela yokuhlanza. Seventh kwaba Hollands "Vincent Van uGogi". On endaweni lesiphohlongo umkhiqizo we-United States "Imvula" - corn vodka izinga. Owesithoba isikhundla - umkhiqizi likagologo "Ketel Omunye" waseHolland. Top ten hit brand olusuka eNgilandi "Yeminqumo 3".
Isilinganiso vodka 2015 eRussia
nozakwethu Domestic banquma ukungayisebenzisi nhlobo i zisale ngemuva omakhelwane babo entshonalanga futhi baqhuba isilinganiso yayo vodkas. It uhlolwa imikhiqizo kuphela brand ezifuywayo. Ngesikhathi mncintiswano utshwala izigaba eziyisikhombisa wanikwa kokuhlaziywa firewater. Ukutholwa Yonyaka yilezi: vodka organic "namazolo Oluhlanzekile '," Russian pepper Decor "," Melt yemvelo' futhi 'EZULWINI ICE ". Emkhakheni we super-premium ingxenye abawinile babe "Honey Lemon", "I-Imperial Trust," "namazolo ehlanzekile 'kanye' SIBALCO". Esikhathini premium ingxenye izigaba zaziphawuleka ngokungabi lemikhiqizo ezifana "Black Diamond", "Radamir", "Gulf Stream", Selecta Lux, "Haoma le OKUMHLOPHE", "Degrees Premium".
Emkhakheni we "sub-premium ingxenye" Igolide wathola "Shining frost Arctic", "Sormovo indaba lyrical" futhi "Suite Sormovo", "Morosha", "Ural Polar". Emkhakheni we "kuqhakanjiswe ingxenye" iwine "Sibiryachka", "Kusihlwa ka-Altai", "Bheka, iphunga iqhwa", "oda laseSiberia" futhi "Match". Isigaba "ingxenye Yabantu" waqokomisa uphawu "akhuthazayo", "On grammulke" futhi "Bala Ledoff". Esikhathini "vodka Special" Igolide wathola "Haoma yasekuqaleni", "Podledka", "Pervak ziphuzo zazihluzwa ekhethekile kabili".
Inani elikhulu of abawinile kusikisela ukuthi iRussia Liquor umkhakha ihlangabezana nenkathi yokudlondlobala kwawo. Minyaka yonke kukhona amagama amasha, ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze lomkhiqizo kanye original zokupheka. Yiqiniso, akufanele sikhohlwe ukuthi indawo yokuqala simo kuyinto vodka, okuyinto intengo ngokuvamile ingaphezulu kuka.
Iningi ukuthenga vodka emhlabeni
Naphezu izinkomba ukukala, okungcono ethengisa vodka uhlala sha British "Smirnoff". Isikhundla yesibili kule simo izwe Ukraine i-trade mark "Isinkwa isipho." indawo yesithathu ngeka vodka "Absolut" evela eSweden. Endaweni yesine , "Green Mark" ezivela eRussia. indawo lesihlanu nelesithupha emhlabeni simo wathatha brand kusukela Ukraine - "Nemiroff" futhi "Khortytsya". brand Polish "Czysta de luxe" wathatha esigabeni lwesikhombisa rankings of. imigqa emithathu yokugcina uhlu phakathi brand ezivela eRussia naseBelorussia - ". Belenky" "Five Lakes", "crystal" futhi
Naphezu izilinganiso kanye nemincintiswano labetibambile phakathi utshwala, umthengi okuthandwa e ahlukahlukene kakhulu kuqhathaniswa. Izwe ngalinye ukhetha isiphuzo sakhe futhi namanje brand ethandwa kakhulu ihlolwe, kungase kutholakale kusukela eminyakeni eminingi eyadlula.
brand IsiFinishi of "Finlandia" libhekisela kulabo abakhiqizi. Umkhiqizo yalesi brand kuyahluka ukunambitheka omuhle, futhi konke sibonga iresiphi. Vodka senziwa ngesisekelo webhali namanzi okuhlanzekile entwasahlobo. Ekuqaleni, eRussia, futhi manje sha English "Smirnoff" hola ukuqashelwa abathengi emhlabeni wonke, futhi zonke ngenxa izinga. "Absolut" kwakhululwa okokuqala ngo-1879, futhi kusukela ngaleso sikhathi umkhiqizo evela eSweden waba isiphuzo oyintandokazi oludakayo emazweni amaningi emhlabeni wonke.
Beer "UBlanche" - isiphuzo odumile Belgian
Umlando wenkolo nogologo Jack Daniels
Cocktail "Lights eMoscow": ukunambitheka mnene futhi imimoya eliphezulu
Cocktails nge vermouth ekhaya
Beer: izinhlobo kanye nezincazelo zawo. brand owaziwa futhi ubhiya umhlabeleli
"Volma-ungqimba": ukubuyekezwa. "Volma-ungqimba" (Gypsum usimende) ukusetshenziswa
"Berry Malina" e-Gelendzhik: bonke abafundi beklasi "Lux"
Wathi. Inani igama kanye nezimfanelo ezakhayo womnikazi wayo
Iplanethi sika labantu: labantu nokuthuthukiswa Amathrendi
Indlela hlola esitolo online for bobuqiniso: Ukufunda ukuhlola amasayithi
I amafilimu edume kakhulu nge Sylvester stallone: uhlu. Amafilimu nge stallone "Rocky 3", "umgibeli" "Expendables 2", "Rambo: First Blood"
Biorevitalization ukulungiselela "Gialual": cosmetologists ukubuyekezwa, izici isicelo ukusebenza kahle
Amadonki aseConnie ayingqayizivele: amathiphu okuthunga